သဂျီး (?????) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သဂျီး (?????)
Posted by အာဖျံ ကွီး on Feb 18, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, My Dear Diary, Society & Lifestyle | 15 comments
အာဖျံကွီး မန္တလေးမှာ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ် သွားတက်တုန်းကလေ …
တစ်ရက် … အာဖျံကွီးနဲ.အဒေါ်တစ်ယောက်နဲ.အတူတူ သူ.သား (အာဖျံကွီးရဲ. မောင်လေးဝမ်းကွဲ) ရဲ.စတိတ်ကျောင်းကို အတန်းပိုင်ဆရာမကိုပြောစရာရှိလို. သွားကြတရ်။ Break Time ဆိုတော့ ကလေးတွေလဲ ဆော့နေကြတဲ.သူနဲ.၊ တွိုင်းလတ်သွားတဲ.သူနဲ.၊ အဲ … အတန်းပိုင်ဆရာမလဲ မရှိဘူး၊ အာဖျံကွီးမောင်လေးလဲ အတန်းထဲမှာ မရှိဘူး။
ဒါနဲ. … အတန်းထဲလဲဝင်လိုက်ရော … ဟိုကလေးက … သဂျီးအမေလာတရ်ဟေ့ … ဒီကလေးကလဲ … သဂျီးအမေလာတရ်ဟေ့ … တချို.ကလေးကလဲ … အန်တီ … သဂျီး … အဲ … ကျော်ဇောလင်း မရှိဘူး … သားသွားရှာပေးမရ်နဲ.။ ??????
အဒေါ်က သူ.သားတက်ရတဲ့ အတန်းတိုင်းမှာ Black Board ကို White Board ပြောင်းပေးတာနဲ. … အဟဲ … ပါတိတ်ကလေးပေးရတာနဲ. … ကလေးတွေကိုလဲ မုန်.ခဏခဏသွားကျွေးတတ်တော့ … ကလေးတွေက သူ.ကိုကောင်းကောင်းသိတရ်လေ။
အဲဒါကြောင့်မို.ပဲ … သူက … အာဖျံကွီးကို တိုးတိုးလေးလာပြောတရ်။ သမီးကြားလား … သားတော့ အတန်းထဲမှာ ဗိုလ်ဖြစ်နေပီထင်တရ် .. သဂျီးဆိုပါလား .. သမီးရေ။ ?????
အဲဒါနဲ.ပဲ … အဲဒီနေ.က ဆရာမနဲ. ပြောစရာဆိုစရာရှိတာတွေ ပြောဆိုပီးပြန်လာခဲ့ကြတရ်။
ညနေကျောင်းဆင်းချိန်ရောက်တော့ … သူ.သားတော်မောင် ကျောင်းဆင်းလာရော … ရေမိုးချိုး၊ ကျောင်းစာတွေလုပ် … ညနေထမင်းစားချိန်ရောက်တော့မှ … ထမင်းစားနေကြရင်းနဲ. … သားရေ … သားကို သားသူငယ်ချင်းတွေက ဘာလို. “သဂျီး” လို.ခေါ်ကြတာလဲဟင်။
အော် … အဲဒါလား … ဟီးဟီး … အမေကြောင့်ပေါ့ … အမေကသားကို ရှေ.သွားနှစ်ချောင်း အကြီးကြီးဖြစ်အောင်မွေးထားလို.လေ။ အဲဒါကြောင့်မို. (သွားကြီး) “သဂျီး” လို.ခေါ်တာဗျ … မေမေရ … ဟီးးဟီးးဟီးး
စကားမစပ် … ဒို.ရွာက Living Together ဆိုတာနဲ. မန်းလိုက်တိုင်း Dislike လက်ဆောင်တွေတသီကြီး ရတတ်တဲ့ … ဒို.သဂျီးမှာရော … သဂျီးအခေါ်ခံရတဲ့ တခြားအကြောင်းရှိသေးလားဂျ။ ကိုကြောင်ကြီးကတော့ ပြောတာပဲ … သွားစရာရွာမရှိလို. မြှောက်ပင့်ပီးခေါ်ကြတာ … ဆိုလား … ဟီးးဟီးးး
ချစ်လို.ခင်လို.စတာပါဂျာ … ဟီးးး ;) ;)
နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်
မြို့မှာ ဆို မြို့တော်ဝန်
ရွာမှာ ဆို သကြီး
အဲလို ခေါ်ဝေါ် သုံးတတ်သလိုပါဘဲ..
ဆိုက်ကလေးကို ရွာလို သဘောထားပြီးတော့ ဆိုက်ထောင်တဲ့ လူကို သကြီးလို့ ခေါ်လိုက်တာပါ။ သကြီး ကို သဂျီးလို့ ရွဲ့ပြီး ပေါင်းတာပါ။ ဂျီး = ဂျီးထူ / ညစ်ပတ်
ရွာထဲက သဂျီး ဆိုတာကလည်း ခေသူ မဟုတ်ဘူးလေ။ သူက ဘုန်းကြီး စာချ လစ်ပင်းတူဂဲသား ရှေ့ဘ၀ နောက်ဘ၀ မရှိ ငရဲ မရှိ နတ်ပြည် မရှိ တွေးပြီး နေတတ်တဲ့ ရုပ်ဝါဒီ ဆန်ဆန် ဖြစ်နေတယ်လေ။ ဒီတော့ ကိလေသာ ဂျီးတွေ ထူ နေလို့ သဂျီးလို့ ပြောင်ပြီး စာလုံးပေါင်းရင်း သဂျီး ဖြစ်သွားလေ သတည်းပေါ့ကွယ်။
အမှန် ပြောရရင်တော့ စိတ်သဘောထား ကောင်းရှာပါတယ်။ သူကို ပြောလည်း သူက ဘာမှ ရန်မလုပ်ဘူး လူကြီး လူကောင်းဆန်ဆန် ပြောတတ်တယ်။ နည်းနည်း စွာတဲ့ လူနဲ့ ဆိုရင်တော့ ဘာမှ မပြောဘဲ အဖက်မလုပ်ဘဲ နေတတ်တယ်။ သဂျီးမှာလည်း ကောင်းတဲ့ အချက်တွေ ရှိပါတယ်။
သူပေးတဲ့ ပွိုင့်ကို ယူထားတော့ သူ့ကောင်းကြောင်းလေး ပြောပေးတာပေါ့။
သဂျီး = ရွာသူကြီး
ဗမာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံသေချာမတတ်တဲ့ ရွာသူရွာသားတစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တဲ့ စာလုံးကို လိုက်သုံးကြရင်း သဂျီးဆိုပြီး ဖြစ်လာရတာ …
သဂျီးကိုယ်တိုင် ခံယူထားတဲ့ ဘွဲ့အမည်က ဆင်ဆရာကြွက်ဖြူများရှင် အကြီးအကဲ
သူကြီးလိုခေါ်ရင် မမိုက်ဘူး ။
ဒါကြောင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး အားရပါးရ သဂျီး……………….လို့ခေါ်တာပါ။
ရွာသူ နဲ့ ရွာသား ပေါင်းမှ တယောက် လား..
ရွာသား က တယောက် ထင်နေတာ။
ဘာမှ ဟုတ်ဘူး နောက်တာ.. ဒီနေ့ စောစော အိပ်ပြီ ဂျီးထူ နေလို့.. ဂျီးတွန်းပြီးမှ လာခဲ့မယ်။ နောက်နေ့မှ အာရွီးတော့မယ်။
ရွာသူ ရွာသား တစ်ယောက်ဆိုတာက ကျားလား မလား သေချာမသိတဲ့ သဘောနဲ့ ရောရေးလိုက်တာ ..
ရွာသူ (သို့မဟုတ်) ရွာသား ..
ဘာကောင်လည်းဆိုတာသိသွားအောင်..အိမ်ကကြွက်တွေ ထုံးသုတ်ပြီး ထုတ်ပြရတော့မယ်နဲ့တူတယ်…။
ပုံ..။ ။ ဆင်ဆရာကြွက်ဖြူများရှင် အကြီးအကဲ။
အိမ်က ကြွက် ထုံးသုတ်ပြီး ထုတ်ပြ စရာ မလိုပါဘူး ပုံမြင်တာနဲ့ သိတယ် ကြွက်ပြာဆိုတာ..
အော် သဂျီး သဂျီး မြင့်လွန်းတဲ့သစ်ပင် လေတိုက်ခံရတယ်လို့ သဘောထားပြီး ဖြေသိမ့်လိုက်ပါနော်။
သဂျီးဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို အဘိဓမ္မာကျမ်းပြုတ်ဆရာမိုက်ကယ်အောင်ပု စခဲ့တာမဟုတ်လား။ ဘာအဓိပါယ်ဆိုတာ သူ့ကိုမေးကြည့်ပေါ့..
ကဲ အဘပု….. ဦးကြောင်ကြီးကပြောတယ် အဘပုကိုမေးကြည့်တဲ့…..
ကြွက်ဖြူငါးကောင်ပြနိုင်ရင် ငါးစီးရှင် သဂျီးမင်းလို့ ခေါ်ပေးမယ်လေ၊:D
ဂျကား မချပ်.. သဂျီး က ကြွက်ဖြူ ငါးစီးရှင် ဆိုတော့ ပုံထဲမှာ ကြွက်ဖြူ ၆ကောင် မြင်နေတယ်။ သဂျီးက ဘယ်အကောင်လဲ အပေါ်ဆုံးက မိုးထားတဲ့ အကောင်လား။ အောက်ဆုံးက အကောင်လား။ (အောက်ဆုံး အကောင်ကတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာလို သက်တော် စောင့်တွေ တခုခု ဖြစ်မှာ စိုးလို့ ၀ိုင်းဖိ ထားတာ)